News Archives — Page3of 23 — Anycall Mobile
Samsung အနေနဲ့ လာမယ့် ဇန်န‌ဝါရီလလယ်လောက်မှာ Galaxy S20 Series ရဲ့ Successor ဖြစ်လာမယ့် Galaxy S21 Series ကိုမိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီ S21 Series ထဲမှာဆိုရင် Galaxy S21,…
Galaxy Z flip ပုံစံံဖုန်းမျိုးကိုမူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်တဲ့ OPPO
အခုလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ အရင်တုန်းက Keypad တွေလို အပေါ်အောက်ခေါက်လို့ရတဲ့ ဖုန်းမျိုးတွေဟာ Samsung ရဲ့ Galaxy Z Flip နဲ့ Motorola ရဲ့Razr မှာပဲတွေ့ရဦးမှာပါ။ အခုမှာတော့ OPPO ကနေ Z Flip…
Reno5 Pro+ မှာ ဘယ်လို အလန်းစား Camera မျိုးကိုတွေ့လာရမလဲ??
ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ OPPO အနေနဲ့Reno5Series အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လာဖို့စီစဉ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းဖုန်းတွေထွက်လာဖို့အချိန်နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ OPPO Reno5 Series နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Specs တွေကလည်း တစ်စနှင့်တစ်စထွက်လာနေပါတယ်။ လွန်းခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကတော ဖုန်းတွေရဲ့ Design ပုံတွေထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဒီ…
Xiaomi Mi 11 ၊ Mi 11 Pro တို့ရဲ့ Specs တွေနဲ့ ပုံတွေထွက်ပေါ်လာ…
Xiaomi အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၁ ၊ ဇန်နဝါရီလလောက်မှာ Mi 10 Series ရဲ့ Successor ဖြစ်လာမယ့် Mi 11 Series ကိုမိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီ Mi 11 Series…
Snapdragon 888 Chipset အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Qualcomm
Qualcomm အနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ Qualcomm Tech Summit 2020 ကို Dec.1 – Dec.2 နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ကျင်းပလျှက်ရှိနေပြီး မနေ့ကပဲ သူတို့ရဲ့ Flagship Chipset ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 888 Mobile Platform…
Reno5Series ရဲ့ Design နဲ့ Specs တွေထွက်ပေါ်လာ..
OPPO အနေနဲ့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ Reno5Series အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းဖုန်းတွေမထွက်လာခင်မှာပဲ OPPO Reno5 Series နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Specs တွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဖုန်းရဲ့ Design ပုံတွေထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ဒီပုံတွေကိုတော့…
၂၀၂၁ ၊ ဇန်နဝါရီမှာထွက်လာမယ့် Mi 11 Series
Xiaomi အနေနဲ့ ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi 10 နဲ့ Mi 10 Pro တို့ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဒီဖုန်းတွေထွက်ထားတာတစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးပြီးမို့လို့ Mi 10 ၊ Mi…
မကြာသေးခင်က Xiaomi အနေနဲ့ Redmi Note95G Series အသစ်ကိုထုတ်လာတော့မယ့်အကြောင်း ကောလဟလတွေ ၊ သတင်းတွေအစုံထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ Xiaomi ကနေ Redmii Note9series အသစ်…
လွန်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလောက်တုန်းက OnePlusအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ OnePlus 8T ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ OnePlus 8T ဟာ Flagship ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တာနဲ့အညီ High-Quality Features တွေနဲ့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ OnePlus ရဲ့…
ခုချိန်မှာ လူတိုင်းက ကိုယ့်ဖုန်းလေး Android 11 ရလာမှာလား? ဆိုပြီး သိချင်နေကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ခြေရာခံမိသလောက် Android 11 ရလာနိုင်တဲ့ Xiaomi Device တွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Android…
မကြာသေးခင်က OPPO အနေနဲ့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ Reno5Series အသစ်ထွက်ရှိလာတော့မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ နာမည်ကြီး Leaker တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Digita Chat Station က OPPO…
Oppo အနေနဲ့ မနေ့ကတုန်းက “Inno Day” ဆိုတဲ့ Event တစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာဆိုရင် Inno Day ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်း ဆန်းသစ်လှတဲ့ Products အသစ်တွေကို OPPO ဘက်ကနေချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Products တွေမှာလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့…
Redmi Note95G Series ကို နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှာတွေ့လာရတော့မယ်
မကြာသေးခင်က Xiaomi အနေနဲ့ Redmi Note95G Series အသစ်ကိုထုတ်လာတော့မယ့်အကြောင်းLeak သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဒီ Redmi Note95G Series ထွက်လာမယ့် ရက်အတိအကျထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီသတင်းကိုတော့…
120 Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ QHD+ Resolution Display ပါဝင်လာမယ့် Mi 11 Pro
မကြာခင်မှာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 875 Chipset ထွက်လာတော့မှာမို့လို့ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာ ကမ္ဘာပထမဆုံး Snapdragon 875 Chipset ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုရဖို့ ကြိုးစားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်လလောက်တော့တုန်းကတော့ Samsung Galaxy S21…